ट्रान्सजेन्डर छोरी पिता मस्कसँग सम्बन्ध तोड्न अदालत पुगिन्
२०७९ असार ७ मंगलबार
काठमाडौँ । विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति तथा टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलोन मस्क फेरि एकपटक चर्चामा छन् । यसपटक कारण उनको ट्रान्सजेन्डर छोरी हुन् ।
उनकी छोरीले आफ्नो नाम भिभियन जेना विल्सन राख्न र नयाँ जन्म प्रमाणपत्रमा आफ्नो नयाँ लैङ्गिक पहिचान देखाउन अदालतमा निवेदन दिएकी छिन् । उनले अब आफ्नो जैविक बुबासँग नबस्ने र उनीसँग कुनै सम्बन्ध राख्न नराख्ने बताएकी छन् ।
मस्ककी छोरीको पहिलो नाम जेभियर अलेक्ज्याण्डर मस्क हो, उनी हालै १८ वर्षकी भइन्। उनको आमाको नाम जस्टिन विल्सन हो, जसले २००८ मा मस्कसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी थिइन् । केही समयअघि जेभियर पुरुषबाट महिलामा परिवर्तन भएकी थिइन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार अनलाइन कागजातमा जेभियरको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।
मस्ककी छोरीले अप्रिलमा सान्ता मोनिकाको लस एन्जलस काउन्टी सुपीरियर कोर्टमा नाम परिवर्तन र आफ्नो नयाँ लिङ्ग पहिचान झल्काउने नयाँ जन्म प्रमाणपत्रको लागि निवेदन दिएकी थिइन् । हालै केही अनलाइन मिडिया रिपोर्टमा यो कुरा बाहिर आएको छ ।
छोरीको नाम र लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी कागजात अदालतमा दायर भएको झण्डै एक महिनापछि मेमा मस्कले रिपब्लिकन पार्टीलाई आफ्नो समर्थन घोषणा गरेका थिए । यसका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले देशभरका राज्यहरूमा ट्रान्सजेन्डर अधिकारहरू सीमित गर्ने कानूनलाई समर्थन गर्छन् ।
भिभियनले उनको बुबाको सार्वजनिक अस्वीकृतिको कारण भने खुलाएकी छैनन् र मस्कले पनि यस बारेमा अहिलेसम्म आधिकारिक बयान दिएका छैनन् ।
एलन मस्कसँग जोडिएका चर्चित ६ विवाद
काठमाडौँ । आज विश्वकै धनी व्यक्ति एलन मस्कको जन्मदिन हो । उनी ५१ वर्षका भएका छन् । स्पेसएक्स र टेस्लाका सीईओ २०२० मा कोभिड-१९ महामारीको प्रकोप पछि १० गुणाभन्दा बढि
मस्कको भविष्यवाणी- जापान पूर्ण रूपमा लोप हुनसक्छ !
काठमाडौँ । टेस्लाका मालिक तथा विश्वकै धनी व्यक्ति एलन मस्कले फेरि एकपटक थप सन्तान जन्माउने कुरा गरेका छन् । मस्कले अमेरिकाको जन्मदर लगातार घट्दै गएको र स्थितिमा सुधार नभए जापानजस्तो
चीनको लकडाउनले टेस्लालाई अर्बौं डलरको घाटा !
काठमाडौँ । टेस्लाका सीईओ तथा विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कले चीनको लकडाउनका कारण अर्बौं घाटा बेहोरेका छन् । एलन मस्कले जर्मनी र अमेरिकामा टेस्लाका नयाँ कारखानाहरूले चीनमा ब्याट्रीको अभाव र
काठमाडौँ । विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति तथा टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलोन मस्क फेरि एकपटक चर्चामा छन् । यसपटक कारण उनको ट्रान्सजेन्डर छोरी हुन् । उनकी छोरीले आफ्नो नाम भिभियन जेना